Poly Bridge 1.2.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.2.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ႏွစ္က
ဂိမ္းမ်ား သြင္တူျပဳျခင္း Poly Bridge
Poly Bridge ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Poly တံတား, ဂိမ်းနာရီများစွာနှင့်အတူ hit Indie တံတားတည်ဆောက်ဖို့ရူပဗေဒခေါင်းစဉ်။
"တစ်ဦးကပဟေဠိဂိမ်းကိုစိတ်ဝင်စားမည်သူမဆိုအဘို့ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ " - TheGamingReview
* 105 ကင်ပိန်း Levels
* 22 အောင်မြင်မှုများ
* Hydraulic piston
* Swing, ခုန်လျက်, ဂန္ထဝင် Bridges
သင့်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာတီထွင်ဖန်တီးမှုအပေါငျးတို့သခေါင်းလောင်းထိုးနှင့်စီများမှုတ်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နှင့်လတ်ဆတ်သောတံတားတည်ဆောက်ရေး Simulator ကိုအတူတိုက်ဖျက်မည်! စိန်ခေါ်မှုရူပဗေဒပဟေဠိ၏ 100+ အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအပြည့်အဝပေးထားသောမဲဆွယ်စည်းရုံးရေး Play ဒါမှမဟုတ် Sandbox အတွက်သင့်ကိုယ်ပိုင်ပဟေဠိနှင့်တံတားဒီဇိုင်းများပါစေ။
အောင်မြင်မှုမဆိုနည်းလမ်းဖြင့်၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်မှကားများလာပြီခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်; ဆိုင်းငံ့ခံရ, ရိုးနှင့်ခုန်တည်ဆောက်, ကို double-နှစ်ထပ်, drawbridges ရွေ့လျားနှင့်အများကြီးပို။ , ဘတ်ဂျက်အောက်မှာနှင့်ကြံ့ခိုင်, ခိုငျမွဲတံတားနှင့်အတူတိုင်းအဆင့်ဖြည့်စွက်နေတဲ့ Poly တံတားမာစတာအင်ဂျင်နီယာချုပ်ဖြစ်လာဖို့ ... နှင့်လျှို့ဝှက်ကမ္ဘာတွင်င့်ပါ။
Poly Bridge အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Poly Bridge အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Poly Bridge အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
tiendasanmun10 စတိုး 189 326.38k
Poly Bridge ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Poly Bridge အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Dry Cactus Limited
App Name: Poly Bridge
Release date: 2018-04-22 05:38:13
လက်မှတ် SHA1: 21:AA:65:91:15:FD:3F:3F:06:F2:83:20:67:AD:F2:39:EF:59:56:53
အဖွဲ့အစည်း (O): Dry Cactus
Poly Bridge APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ